News Collection: हेरोइनभन्दा रक्सी खतरनाक
हेरोइनभन्दा रक्सी खतरनाक
मदिराका सम्बन्धमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका फरक-फरक धारणा छन् । कोही रक्सी खानै हुँदैन भन्छन् भने कोही खाँदा फरक पर्दैन भन्छन् । कोही ठिक्क खानुपर्छ भन्छन् भने कोही जति खाए पनि हुन्छ भन्छन् । मदिरासम्बन्धी केही विश्वप्रसिद्ध अनुसन्धान एवं शोधका नतिजालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मेडिकल पत्रिका ल्यान्सेटमा प्रकाशित एक ताजा शोधका अनुसार स्वास्थ्यका लागि मदिरा हेरोइनभन्दा हानिकारक हुन्छ । यसमा सुर्ती या तमाखु र कोकिनलाई मदिराजत्तिकै हानिकारक मानिएको छ । तर, एक्सट्यासी र एलएसडीजस्ता नशालु औषधिलाई भने सबभन्दा कम हानिकारक ड्रग बताइएको छ ।
यस रिपोर्टका लेखकद्वय प्रोफेसर डेबिड नट र डा. लेस किङ हुन् । दुवै बि्रटेनका पूर्व मुख्य औषधि सल्लाहकार हुन् ।
प्रोफेसर नट भन्छन्, 'रक्सी सबभन्दा हानिकार नशा हो किनभने यसको प्रयोग समाजमा व्यापक स्तरमा हुन्छ ।' नशालु औषधि या पदार्थबाट हुने शारीरिक तथा मानसिक हानि, लत, अपराध, अर्थव्यवस्था र समाजमा पर्ने असरका आधारमा हरेक नशालु चीजलाई अंक दिएर यस रिपोर्टमा सूचीबद्ध गरिएको छ, जसअनुसार मदिरापछि हेरोइन र यसपछि क्य्राक कोकिन खतरनाक नशालु चीजमा गनिएका छन् ।
'क्य्राक कोकिनको लत सबभन्दा खराब लत हो, तर यसको लतमा फसेका मानिसका संख्या मदिराको लतमा फसेका मानिसका संख्याभन्दा धेरै कम छ,' प्रोफेसर नट भन्छन्, 'आज संसारभरि धेरै मानिस मदिराका लतमा फसेका छन् र उनीहरू मदिराका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने स्थितिमा छन् ।'
उनका अनुसार कुनै नशाको एक व्यक्तिमाथि पर्ने प्रभाव र समाजमा पर्ने प्रभावलाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ ।
किन कसैलाई ढिलो, कसैलाई चाँडो लाग्छ ?
कोही यस्ता हुन्छन्- जो दुई पेग मदिरा चढाउनासाथ लर्खराउन थाल्छन्, लर्बराउन थाल्छन् । तर, कोहीलाई भने दुई पेगले छुँदा पनि छुँदैन र उनीहरू पूरै होसमा रहन्छन् ।
अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले एक यस्तो जिनको खोजी गरेको दाबी गरेका छन्, जसका सहायताले किन कसैलाई रक्सी चाँडो लाग्छ त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ । उनीहरूका अनुसार सिवाइपिटुई वन नामक यो जिन १० देखि २० प्रतिशत मानिसमा यो जिन पाइन्छ । यस जिनले रक्सीको लतसँग लड्न मद्दत गर्ने विश्वास पनि गरेका छन् उनीहरूले ।
नर्थ क्यारोलिना विश्वविद्यालयले भनेको छ- यस शोधको उद्देश्य मदिराको लतविरुद्ध लड्न सहयोग पुर्‍याउनु हो । क्लिनिकल एन्ड एक्स्पेरिमेन्टल रिसर्च नामक जर्नलका अनुसार मानिसलाई मदिराप्रति ज्यादा संवेदनशील बनाउन सिवाइपिटुई वन जिनलाई औषधिका रूपमा दिन सकिन्छ । यसका मुख्य शोधकर्ता प्रोफेसर किर्क विल्हेल्मसन भन्छन्, 'नशाको अचुक औषधि खोज्ने काममा हामीले अझै धेरै गर्न बाँकी छ, तर मदिराले दिमागमा कुन प्रकारले प्रभावित गर्छ, त्यसबारे यस जिनमार्फत धेरै जानकारी हासिल गर्न सकिन्छ ।'
मदिरा शरीरमा प्रवेश गरेपछि यसको केही हिस्सा एक इन्जाइमद्वारा दिमागमा पुग्ने गर्छ । सिवाइपिटुई वन जिन भएका मानिसमा मदिरा एकदम चाँडै दिमागमा पुग्छ । यही जिनमार्फत कसैसैलाई किन रक्सी चाँडै लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिने प्रोफेसर विल्हेल्मसनको भनाइ छ ।
यस नतिजामा पुग्नका लागि शोधकर्ताहरूले २ सय जोडी विद्यार्थीमा प्रयोग गरिएको थियो । उनीहरू आफू मदिराको लत भएका मानिस नभए पनि उनीहरूका बाबुआमामध्ये एकजना भने मदिराको लतमा फसेका थिए । शोधकर्ताहरूले विद्यार्थीलाई अन्नबाट बनेको मदिरा र सोडाको मिश्रण दिएका थिए, जो औसतमा तीन पेग मदिरा बराबर थियो ।
केही अन्तरालपछि उनीहरूलाई उनीहरू कस्तो अनुभव गरिरहेका छन् सोधिएको थियो । उनीहरू नशामा थिए कि, होसमा, उनीहरूलाई निद्रा लागिरहेको थियो कि जागै थिए, यस्तै प्रश्न सोधिएको थियो । शोधकर्ताहरूले यसको नतिजा सिवाइपिटुई वन जिन दिएपछि विद्यार्थीमा दिइएको असरसँग तुलना गरेका थिए । यसपछि के पत्ता लाग्यो भने सिवाइपिटुई वनले धेरै हदसम्म कुनै व्यक्ति दोस्रो व्यक्तिको तुलनामा मदिराको असरलाई बढी राम्रो तरिकाले झेल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ ।
प्रोफेसर विल्हेल्मसेनले यसबारे अरू शोधको आवश्यकता देखेका छन् । 'मदिराको लत एक जटिल रोग हो,' उनी भन्छन्, 'मानिस किन मदिरा पिउँछन्, यसका धेरै कारण हुन सक्छन् । र, यो जिन केवल एक कारण हुन सक्छ ।'
प्रोफेसर कोलिन ड्रमन्ड भन्छन्, 'रक्सीको बानी लाग्नुपछाडि परिवारको धेरै प्रभाव हुन सक्छ । जँड्याहा आमाबाबुका सन्तान जँड्याहा हुने सम्भावना अरूका तुलनामा चारगुणा बढी हुन्छ ।'
हृदयरोगबाट बचाउँछ मदिराले स्पेनमा भएको एक अध्ययनअनुसार हरेक दिन मदिरा सेवन गर्नाले पुरुषमा हृदयरोगको खतरा एकतिहाइ कम हुन जान्छ । यदि उनीहरू अधिक मात्रामा मदिरा पिउँछन् भने यो बानी हृदयरोगविरुद्ध अरू बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
उल्लेखनीय के छ भने स्पेनका मानिस अपेक्षाकृत बढी मदिरा पिउँछन्, तर त्यहाँ हृदयरोग अपेक्षाकृत कम पाइएको छ । मदिराको लतमाथि स्पेनमा भएको यस अध्ययनमा २९ देखि ६९ वर्षका १५ हजार ५ सय पुरुष र २६ हजार महिला सहभागी थिए । तर, 'हार्ट' नामक जर्नलमा छापिएको रिपोर्टअनुसार महिलालाई अल्कोहल सेवनबाट फाइदा देखिएन ।
यस अध्ययनमा सहभागी मानिसका बानीलाई १० वर्षसम्म अध्ययन गरिएको थियो । उनीहरूलाई मदिरा नछुनेदेखि दैनिक ९० ग्राम अल्कोहोल सेवन गर्नेसम्म ६ समूहमा विभाजन गरिएको थियो ।
अल्कोहल र हृदयरोगबीचको सम्बन्ध अहिले पनि विवादास्पद छ ।
अनुसन्धान टोलीले पत्ता लगाएअनुसार हरेक दिन एक सट भोड्का पिउनेमा हृदयरोगको खतरा ३५ प्रतिशतसम्म कम हुन्छ, तर दैनिक तीनदेखि एघार सटसम्म भोड्का पिउनेमा हृदयरोगको खतरा आधा रहन्छ ।
महिलामा भने यस्तोखाले कुनै फाइदा देखिएन । यसै पनि उनीहरूमा हृदयरोग हुने सम्भावना कम हुन्छ । अनुसन्धान टोलीका अनुसार महिलाको शरीरका अल्कोहलको पाचन भिन्नै ढंगले हुन्छ र स्त्री हार्माेनले कम उमेरका महिलालाई हृदयरोगबाट रक्षा गर्ने काम गर्छ ।
तर, बि्रटिस हार्ट फाउन्डेसनले स्पेनको यस अध्ययनलाई आँखा चिम्लेर ग्रहण गर्न नहुने बताएको छ । उसले भनेको छ, 'यस अध्ययनले मुटुको धमनीसँग सम्बन्धित रोग तथा अरू प्रकारका हृदयरोगमाथि विचार गरेको छैन । साथै, यसमा अत्यधिक मदिरा सेवनबाट हुने अरू रोगमाथि पनि विचार गरिएको छैन ।'
फाउन्डेसनकी सिनियर कार्डिक नर्स क्याथी रोसले भनेकी छिन्, 'अल्कोहलले एक अंगलाई सीमित सुरक्षा प्रदान गर्न सक्ला, तर यसको अत्यधिक सेवनले अरू अंगलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ ।'
स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्ने अर्काे बि्रटिस संस्था स्ट्रोक एसोसिएसनले भनेको छ- नियमित रूपमा अत्यधिक मदिरा सेवनबाट हृदयघातको खतरा तीनगुणा बढ्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । त्यस्तै, लन्डन स्कुल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनका प्रोफेर माटिन म्याककीले चेतावनी दिएका छन् कि स्पेनमा भएको यस अध्ययनलाई भरोसा गरेर कसैले पनि धेरै मदिरा पिउन सुरु गर्नु हुन्न । उनले भनेका छन्, 'किनभने अल्कोहल र हृदयरोगको सम्बन्धको मुद्दा अहिले पनि विवादास्पद छ ।'